Xiddiyo, Roobleeyaha & Hoops: Tennis Back In Phoenix - TELES RELAY
ACCUEIL » kale Xiddiyo, Roobleeyaal iyo Xabbad: Tennis Dib Uu Ku Jiro Phoenix
Xiddiyo, Roobleeyaal iyo Xabbad: Tennis Dib Uu Ku Jiro Phoenix
Djampou Christina 15 March 2019
Waa mid ka mid ah waqtiyada ugu muhiimsan ee taariikhda ATP Challenger Tour. Todobaadkii labaad ee BNP Paribas OpenMunaasabadda ATP Masters 1000 kuma koobna oo keliya kuwa weli ku tartamaya degaanka California.
Kuwa raadinaya ciyaaro dheeraad ah ka dib bixitaanka hore ee Well Wells ayaa bartilmaameed u ah todobaadkan isbuuca Arizona Tennis Classic in Phoenix, ka hor inta aan la samaynin trekka Miami ee labaad ee dhacdooyinka 'March Masters'. Xiriirka kubada cagta waa mid xoogan sida abid loogu tartamayo tartanka tartanka.
Led by World No. 21 David Goffin, barbaro la isku darsaday wuxuu leeyahay shan ciyaaryahan oo 50 iyo 17 ee 100 Top of ATP Rankings. John Millman waa seddexaad, iyadoo la soo dhaafay finalka Marseille Mikhail Kukushkin afraad. # Xiddiga asaasiga ah Casper Ruud 100 ugu horeysay ee ATP Rankings, ka dib markii uu semi-final-ka ku dhamaaday Sao Paulo.
Aagga Phoenix waxay horey u marti galisay safar dheer oo ATP ah oo ku yaala Scottsdale (laga bilaabo 1986-2005), oo Andre Agassi, Lleyton Hewitt iyo John McEnroe ka mid ah kooxda heysata. Waxaa dhowaan soo dhaweynayaa Shallenger ku yaala xaafada Tempe ee 2017.
"Tani waa hubaal caqabadda ugu weyn ee sanadka, inta u dhaxaysa Hindiya iyo Miami," ayuu yiri Millman. "Qof walba waa ogyahay inuu ku dhow yahay sidii xaflad dalxiis ah. Waan ogaa in soo socda, in ciyaar kasta oo ay noqon lahayd mid adag. Ka dib markii aan hore u soo baxayay ee Wells Wells, waxaan rabay in qaar ka mid ah kulamo tayo ah oo u socda Miami. Ma aanan dooneynin inaan ku raaxaysto janniga teniska. Waxaan qabaa inay tahay arrin aad u fiican inaan halkaan imaado, lana tarto ciyaartoyda ugu sareysa, tartankana waxa ay iga dhigtay inaan si aad ah u soo dhawaado. "
"Waa runtii ugu fiicnaanta dhacdada ugu horreysa," ayuu yiri Mitchell Krueger. "Ma aqaan inta uu le'eg yahay qorshahan hore. Cimilada ma xakamayn kartid, laakiin waxaan u maleynayaa in wax kasta oo kale uu yahay mid fiican sida aad u codsan kartid. "
Asal ahaan waxaa daabacay https://www.atptour.com
Kanada: pornhub, Xvideos iyo Xnxx ayaa intaa ka badan soo booqday Amazon, Cnn, Bing iyo Bbc
Dibloome: Maamulaha Maamulka Dalxiiska wuxuu dib u eegayaa diblomaasiyadaha NW / SW Qorshaha Gargaarka Bani'aadamnimada NW / SW